Download Vimeo na - akwụghị ụgwọ - Chekwaa vimeo vidiyo na pịa ole na ole
Na-eji nke ochie. Pịa ebe a iji wụnye ụdị kachasị ọhụrụ 4.2.2
Free Download Vimeo Downloader
❝Chekwa vidiyo vimeo na aka ole na ole❞
➶ Saịtị a na - enye gị ohere ibudata vimeo Vimeo ọ bụla site na ịbanye na vidiyo vidiyo.
Detuo URL vidiyo ahụ ma mado ya n'ime igbe dị n'elu, mgbe ahụ onye na-ebudata Vimeo ga-ahụ vidiyo ahụ ozugbo. Pịa aka na njikọ ibudata ma chekwaa vimeo vidiyo na diski mpaghara.
Nbudata Vimeo Mfe
Mgbakwunye a na-enye gị ohere ibudata vimeo site na Vimeo site na itinye bọtịnụ nbudata ozugbo na ngwa ọkpụkpọ Vimeo. ➥ Wụnye ugbu a
Nyere gị aka ibudata vidiyo nkeonwe na Vimeo ma dekọọ vidiyo na-ebi ndụ. Na-akwado ọtụtụ weebụsaịtị. ➥ Wụnye ugbu a
Uru nke Vimeo Video Download Ngwá Ọrụ a
Budata vimeo vidiyo na-akparaghị ókè site na Listi ọkpụkpọ, ọwa, mmasị, lee mgbe emesịrị, Nnakọta.
☀ Ngwá ọrụ anyị iji budata ihe nkiri Vimeo nwere ike ime ka vidiyo ahụ bụrụ obere, site na ikwe ka ị nyefee ya n'ọtụtụ ngwaọrụ n'enweghị mkpa ịntanetị.
☀ Na-ewepụ awa na-enweghị ngwụcha na ntinye! Cannwere ike ibudata vidiyo a ma lee ihe nkiri ahụ na-enweghị nkwụsị ọ bụla (a hapụrụ gị ka ị kwụsịtụ ma nweta obere nri).
☀ Inwere ike rewat vidiyo, ihe nkiri na ihe onyonyo onwa ka ịchọrọ.
☀ Otutu oge nke ihe onyonyo na-egosi na ihe nkesa TV. Ọ bụrụ na ibudata ihe omume ahụ tupu ewepu ya na sava ahụ, ọ ga-abụ akụkụ nke nchịkọta gị.
Vimeo bụ saịtị kachasị mma iji lelee, kesaa ma tinye vidiyo HD. Nwere ike ịchọta ihe ndị masịrị gị site na ịgagharị edemede na ọwa. Mgbe ị nwetasịrị Vimeo Plus ma ọ bụ akaụntụ Pro, ị nwere ike ịnụ ụtọ ọrụ ka mma yana uru ndị ọzọ.
Ihe nkiri vidiyo nke Vimeo
Budata vidiyo ndị ahụ ọsọ ọsọ na usoro dị mfe ma dị mfe na-enweghị ndebanye ọ bụla ma ọ bụ mepee akaụntụ site na ndị na - ebudata vidiyo na ntanetị ma chekwaa vidiyo maka elekere ma ọ bụ ebumnuche ọzọ.
Budata vimeo vidiyo dị elu
Mgbe itesiri nbudata vidiyo site na Vimeo na ntanetị, kpọọ ha ka ha lelee ogo vidiyo. Can nwere ike idowe obi ike na vidiyo ndị ebudatara nwere otu ụdị àgwà ndị ọzọ na ntanetị mbụ.
Pịnye mkpụrụokwu ahụ na mmanya ọchụchọ, vimeo vidiyo metụtara ya ga-egosi. Chekwaa vimeo vidiyo kachasị amasị gị maka iji offline rụọ ọrụ ndị a dị mfe.
Vimeo Downloader na-arụ ọrụ nke ọma na Google Chrome, Firefox, IE, Opera, Safari, Microsoft Edge, UC Browser na ihe nchọgharị weebụ ọ bụla. Na mgbakwunye, ọ bụ ezigbo dakọtara na sistemụ arụmọrụ Mac.
Etu esi ebudata vimeo Vimeo
Vimeo bụ ihe ama ama nke vidiyo zuru ụwa ọnụ, nke emere maka ndị okike. Ndị mmadụ nwere ike bulite, kesaa ma lee vidiyo. Ugbu a, ọ dị mfe karị ibudata vidiyo site na Vimeo ma họrọ ọkacha mmasị HD na ụdị SD na vimeo Downloader! I nwekwara ike ichekwa vimeo vidiyo na mp4 ma ọ bụ mp3 file format. Naanị soro usoro a n'okpuru ma mepụta nchịkọta gị n'ịntanetị.
Tinye Vimeo vidiyo nke URL ma pịa bọtịnụ Budata.
Họrọ usoro na ogo ahụ ma nwee ọ enjoyụ na vidiyo ndị na-anọghị n'ịntanetị!
Ihe karịrị nde mmadụ iri asaa họọrọ ịhọrọ vidiyo dị elu na Vimeo ka ha wee soro ụwa kerịta. Ọ bụrụ na ị bụ nnukwu onye na-akwado Vimeo, Vimeo Video Downloader nwere ike ịbụ nhọrọ kachasị mma gị iji budata obere fim na fim ya na ntanetị. Onye nbudata a dị egwu na-enyere gị aka ịchekwa vidiyo ọ bụla site na Vimeo gaa MP4 dị elu dịka 720p, 1080p, 2K, 4K. Mkpebi niile dabere na mmasị gị. N'ezie, ịdị mma dị elu bụ nhọrọ dị mma. Ihe ọzọ bụ, ọrụ nbudata niile nke onye na - ebudata ihe a bụ 100% n'efu. Ka anyị nwalee!
Chọta Ajụjụ Gị na Azịza Gị Ebe a - Etu esi ewepu ma ọ bụ chekwaa vimeo vidiyo na kọmputa gị?
+ Gịnị bụ Vimeo Video Downloader?
Vimeo Video Downloader bụ ngwaọrụ dị n'ịntanetị iji budata vimeo vimeo na kọmputa gị ozugbo. Iji Vimeo video Downloader ị nwere ike ibudata vimeo vidiyo ọ bụla na usoro MP4 dị elu. Onye na-ebudata anyị weputara njikọ vimeo vidiyo ma wee nwee ike ibudata vidiyo ozugbo. Ọ dị mfe iji ma zuru oke.
+ Ndi Vimeo Video Downloader na-arụ ọrụ na mkpanaka?
Ngwá ọrụ anyị bụ ihe eji arụ ọrụ weebụ nke anaghị egbochi naanị desktọps. Ndị mmadụ nwere ike iji ihe nchọgharị ọ bụla masịrị ha, sistemụ arụmọrụ ma ọ bụ ngwaọrụ ọ bụla iji nweta ya, gụnyere ngwaọrụ mkpanaka.
+ Ebe ka vidiyo m na-aga mgbe ebudatara ha?
Vidiyo na fim nke ebudatara site na ngwa anyị na-abanye na folda ọ bụla ịdebere dị ka nchekwa ndabere gị. Nwere ike ibugharị folda ahụ na draịvụ ọ bụla echere na dabara adaba.
+ Ngwá ọrụ a na - echekwa faịlị faịlị nke ana m ebudata?
Vimeo Downloader anaghị edobe otu nbudata gị na sava ya.
+ Ogologo oge ole ka m nwere ike idobe ọdịnaya m ebudatara?
Ozugbo ịbudatara ihe nkiri ma ọ bụ ihe nkiri na ngwaọrụ gị, ọ bụ nke gị ka ịdobe. I nwere ike lelee ya ugboro ole ịchọrọ n’enweghị nsogbu na mgbasa ozi ọ bụla. Onweghi oge ole ị ga-elele ya.
+ A ga-enwe adware na faịlụ ebudatara?
Obi sie gị ike na enweghị faili ma ọ bụ malware na faili ebudatara. Ndị sava anyị nwere nchekwa, anyị na-agbadata njikọ dị nchebe na ndị ọrụ anyị.
+ Enwere m ike ịkọrọ ndị ọzọ ihe nkiri
Ee, nke ahụ bụ otu n’ime ihe kachasị mma gbasara onye na-ahụ maka Vimeo iji budata vimeo vidiyo, enwere ike ịkekọrịta vidiyo ndị ị na-ebudata na ngwaọrụ ndị ọzọ yana ndị ọzọ.
+ Etu esi enweta Vimeo video Njikọ na gam akporo ma ọ bụ Iphone, Ipad?
Ọ bụrụ n'iji ihe nchọgharị, Kpagide ma Jide na vidiyo ahụ, họrọ Detuo (ma ọ bụ na-egosi ugboro abụọ otiinka) na menu nke na-apụta. Ma ọ bụ pịa ma jide na akara ihe nchọgharị ahụ, na menu menu pịa Họrọ niile ma ọ bụ akara ngosi ya, kpatụ Detuo ma ọ bụ akara ngosi ya.
Ọ bụrụ na-eji ngwa vimeo, chọọ maka bọtịnụ Share, pịa ya, Nkọkọrịta Ekekọrịta ya na kọntaktị, ozi ịntanetị na ụzọ mbụ ga-egosi, chọta Detuo Iji Clipboard nhọrọ wee pịa nke ahụ. Wee laghachi na ihe nchọgharị ma mee site na ...
+ Etu esi ebudata Vimeo Vidiyo na ntanetị na ekwentị gị
⓵ Mepee Vimeo
Ẹkedori ihe nchọgharị gị ma banye na websaịtị gọọmentị nke Vimeo ma ọ bụ mepee ngwa Vimeo na ama gị. Mepee vimeo vidiyo nke nhọrọ gị ma detuo adreesị URL nke ọma.
⓶ Paste Vimeo vidiyo nke URL
Ugbu a gaa na websaịtị FBION ma pinye adres ahụ na Vimeo Video Downloader anyị. Ugbu a, pịa nhọrọ nbudata iji bido nbudata.
⓷ Họrọ ogo nke vidiyo
Mgbe ịhọrọ ogo vidiyo ekwesịrị pịa bọtịnụ nbudata, ibudata vidiyo na nkeji ole na ole dabere n ’faịlụ ị na-ebudata.
⓸ Lelee ya ka emesia na Android / iOS gi
Jide vidiyo vimeo gị site na ngalaba nbudata nke ekwentị gị ma nwee obi ụtọ na vidiyo vidiyo ebudatara na-enweghị njikọ internetntanetị.
Ajuju ndi ozo
Olee otú ibudata vimeo vidiyo na iPhone?
Kedu ka m ga - esi budata vidiyo Vimeo na ekwentị m?
+ Gini mere vidiyo m ji egosi dika odi? Ebee ka ihe onyonyo dị?
Gaa n’ihu, budata ya! Ọ ka bụ vidiyo! Mana Nchọgharị Internetntanetị gị enweghị ike ịhụ nke ahụ, yabụ na-anọchite anya vidiyo dịka ọdịyo ...
Lee, nsogbu bụ na Vimeo na-enye vidiyo mgbe ụfọdụ n'ụdị HEVC, nke ọtụtụ n'ime ihe nchọgharị (gụnyere chrome na Firefox) enweghị ike igwu egwu. Dika odi, Safari nwere ike igwu egwu ahu a nke oma.
Ka o sina dị, ọbụlagodi na ihe nchọgharị ahụ enweghị ike ịkpọ faịlụ a dịka vidiyo, ihe ọkpụkpọ vidiyo gị dị ka VLC ma ọ bụ KMP agaghị enwe nsogbu ọ bụla ịme nke ahụ. Ọdịdị HEVC na-echekwa obere data na enweghị ogo, ọ ga-abụ onye ga-ekwe omume ịkwado usoro AVC ugbu a mana ọ bụ ọdịnihu.
Yabụ ugbu a ka m tụkwasị m obi, budata faịlụ vidiyo ma nwalee na ngwaọrụ gị, ọ ga-arụ ọrụ nke ọma, ị ga-ahụ. Ọ bụrụ na ikwenyeghị m, wụnye Safari, rụọ otu njikọ vimeo, wee hụ otú Safari si eji egwu vidiyo na-egwu egwu nke Chrome ma ọ bụ Firefox na-enweghị ike. Dika odi, ebe egosiputara ya na Safari, IE na Edge nwere ike igwu egwu vidiyo HEVC.
+ Gịnị ma ọ bụrụ na vidiyo anaghị ebudata ọ ga-amalite ịmalite?
Pịa aka nri na vidiyo ma họrọ Chekwa Video / Njikọ Dị ka; maka ekwentị mkpanaaka, Kpatụ ma jide na vidiyo, họta Chekwa njikọta mgbe enwere menu nri.
Ọ bụrụ n ’ịnọ n’otu n’ime ngwaọrụ Apple ndị ahụ nwere mmasị dị ka MacOS, ma ọ bụ IOS nwere iPhones na iPads, nke ọma, atala anyị ụta, ọ bụ Apple na-amachibido nbudata ọ bụla nke mp3 na vidiyo vidiyo site na ihe nchọgharị ahụ, na-anwa ime ka iTunes nọrọ n’etiti ahụ. ha niile. Apps chọkwara ngwa ọdịnala ma ọ bụ ihe nchọgharị pụrụ iche nke na-ekwe ka nbudata faịlụ ọbụlagodi uche Apple.
+ Kedụ ka m nwere ike ibudata vidiyo vidiyo nke agbakwunyere na nzuzo?
Dika vimeo onwe nke onwe dabere na RTMP protocol, Safari na akwado nkwado ibudata udiri vidiyo a. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ibudata vidiyo ndị ọzọ site na Vimeo, ịnwere ike iji onye enyemaka na-ebudata ya.
Ajuju ndi ozo: Enwere m ike ibudata vidiyo nkeonwe na Vimeo?
+ Kedu ka Vimeo Video Downloader si arụ ọrụ?
Ọ na - arụ ọrụ site na ịnweta njikọ ahụ site na igwe anyị n'ihu ọha na - enweghị ndekọ nbanye ọ bụla, ma ọ bụrụ na ọhaneze enweghị ike ịnweta vidiyo ahụ, enweghị ike ibudata ya. Dika achoputara na vidiyo di na nbudata vidiyo a, o choputara udiri omuma ndi a nwere ibudata ma gosi onye oru ahuta otu ha choro iweputa.
+ Etu esi ewepu vimeo vimeo na ekiri offline?
Nwere ike ilele vimeo vidiyo n'ịntanetị?
Ọ bụrụ na nbudata dị maka vidiyo ahụ, ị ​​ga-ahụ bọtịnụ n'okpuru nkọwa vidiyo ahụ nke kwuru na Download. Pịa bọtịnụ nbudata a na vidiyo ahụ ga-amalite ibudata na kọmputa gị ma nwee ọ enjoyụ vidiyo ahụ n'ịntanetị.
+ Vimeo enwere onwe ya?
Vimeo na-enye ndị otu anọ nhọrọ: Plus, PRO, na Business, Premium. Ha niile nwere ọkwa nchekwa na nkwado dị iche iche dịka ị nwere ike ịhụ na eserese dị n'okpuru. Vimeo na-enye ndị otu dị mkpa, n'efu, mana ọ na-egbochi gị 500MB kachasị nchekwa kwa izu.
+ Kedụ ka m ga - esi enweta Vimeo vidiyo?
Detuo URL nke vidiyo ịchọrọ ibudata, wee tapawa ya na mmanya n’elu. Wee pịa bọtịnụ Budata n'aka nri nke ụlọ mmanya ahụ. Ọ ga - ebu ọrụ maka sekọnd ole na ole, mgbe ahụ ị ga - enwe nhọrọ iji budata vidiyo na FLV (Flash), MP4, ma ọ bụ usoro WebM.
+ Kedụ ka m nwere ike ibudata vimeo vidiyo n'efu?
Ebee ka m nwere ike ibudata fim n'efu?
Mepee weebụsaịtị FBION, tinye URL nke Vimeo vidiyo ma pịa bọtịnụ Budata. Ga-ahụ ndepụta nke njikọ niile dịnụ. Họrọ usoro na ogo ahụ, ma kporie vidiyo ndị na-anọghị n'ịntanetị!
+ Nwere ike ibudata Vimeo na choro?
Ezie na ịnweghị ike ibudata vimeo vimeo dị maka ịzụta ma ọ bụ mgbazinye na ngalaba On Demand nke saịtị ahụ, ịnwere ike ibudata vidiyo ndị nweere onwe gị. Kwesighi na akaụntụ iji lee vidiyo, agbanyeghị, ọ bụrụ na ị nwere akaụntụ Plus ma ọ bụ PRO Vimeo, ị ga - enwe ike ibudata faịlụ isi mgbe ọ dị.
+ Kedu ka m ga - esi mee ka nbudata na Vimeo?
Ọzọ, Pro, Azụmaahịa, na ndị otu Premium nwere nhọrọ iji mee ka vidiyo ha mee maka nbudata. Ọ bụrụ n ’Basicbu onye otu di nkpa ma kwalite akaụntụ gị, a ga-aghọrọ nhọrọ maka inye nbudata na-akpaghị aka.
Ọnụnọ vidiyo maka nbudata na-adabere na ntinye aha nke onye mepụtara vidiyo ahụ. Ndị otu dị mkpa enweghị ike ịme vidiyo ha; agbanyeghị, ọ bụrụ na vidiyo a bụ nke More, Pro, ma ọ bụ onye otu azụmahịa, ha nwere nhọrọ ịmegharị na nbudata nbudata ahụ.
+ Ego ole ka Vimeo na-eri?
Onye otu Vimeo Plus, nke na-ebute nchekwa dịtụ obere site na Ntaneti, ga-efu ndị ọrụ $ 7 / ọnwa, nke bụ abụghị nnukwu nnukwu akpa gị. Agbanyeghị, otu ndị otu PRO na - ebugo mkpo, ọ na - ejikwa ọtụtụ nchekwa na HD na - akpọghachi, na $ 20 / ọnwa maka ihe ruru 1TB / afọ ma ọ bụ $ 34 / ọnwa maka 3TB.
+ Ego ole bụ Vimeo chọrọ?
Soro Vimeo PRO maka naanị $ 20 / ọnwa akwụ ụgwọ kwa afọ ịmalite ire. Gbalịa ya n'ihe ize ndụ ruo ụbọchị iri atọ. Were ụlọ 90% nke ego ha nwetara mgbe akwụsịrị ụgwọ azụmahịa. Họrọ ịgbazite, zụta, ma ọ bụ ndenye aha, ma tụọ ọnụahịa nke gị.
+ Otu esi ahuta Vimeo ihe ibudata vimeo maka Mac?
+ Kedu otu esi echekwa vimeo vidiyo na foto gị?
Mgbe ebudatara vidiyo ahụ, dọrọ faịlụ vidiyo site na folda Downloads na kọmputa gị gaa na iTunes ma ọ bụ ngwaọrụ ọzọ dị ka gam akporo ma ọ bụ iPhone. Ugbu a vimeo vidiyo ga-echekwa na mkpanaka mkpanaka gị.
Ọrụ kacha mma n'ịntanetị ibudata vidiyo na Vimeo n'efu.
7 ndị ọrụ gosiri
Ngwá ọrụ a, ihe vidiyo vidiyo na-enweghị nsọtụ dị nso. Ihe niile ị ga - eme bụ yingomi adreesị URL Vimeo vidiyo, tinye ya n’ebe edoziri wee pịa Budata. Naanị obere oge, onye na-ahụ maka Vimeo ga-achọpụta vidiyo ahụ ma mepụta njikọ nbudata maka gị. See hụrụ, ọ dị mfe nbudata vimeo vidiyo n'efu.
Saịtị ahụ na-enye m ezigbo ngwọta maka ibudata vidiyo si na Vimeo n'ịntanetị. Naanị tinye URL vidiyo ahụ wee pịa Budata. Mgbe ahụ, ihe niile ga-aga nke ọma. Ọ dị ịtụnanya.
Onye na-ahụ maka ego, Fort Walton Beach
Nke a bụ Vimeo Downloader kachasị mma nke ejirila m. Enweghị mmachi, enwere m ike ịchekwa vidiyo m kachasị amasị m na kọmpụta. Daalụ maka nnukwu ọrụ gị!
Ọpụrụiche Nkwado Kọmputa, Old Saybrook
Nbudata vidiyo adịbeghị mfe dị ka enweghị ndekọ ọ bụla ị nwere ike ijide vidiyo vimeo. O juru m anya n’ihi na nbudata vidiyo kachasị amasị m n’ime obere nkeji.
Onye Njikwa ebe data, Charlotte
Na nso nso a, ebudatara m nnukwu vimeo vidiyo ma ebudata ya n'ime nkeji ole na ole. O juru m anya site n’ike ya dị ịtụnanya. Nke a zuru oke Vimeo Video Downloader.
Onye Mmepụta Akụrụngwa, Chattanooga
Vimeo Video Downloader bụ ezigbo ngwaọrụ ma na-eme ihe o kwere ná nkwa. Nke a bụ otu kachasị mma iji budata Vimeo Videos. Achọrọ m ịkwado onye ọ bụla!
Onye ọka iwu, Marlboro
Enwere m obi ụtọ na Vimeo Video Downloader. N’ezie, ọ bụ ihe zuru oke ma dị mma karịa ndị ọzọ na - achọta ala dị na ịntanetị.
Ọkachamara Network, Greenland
Nke a bụ nnọọ nnukwu! Enweghị mkpa ibudata. Naanị idetuo na mado URL na ị ga-enweta vimeo vidiyo na oge. A na-akwadokwa ụfọdụ saịtị vidiyo ndị ọzọ a ma ama na-akwado nke ọma. Ahụmahụ dị ukwuu maka m na enweghị nsogbu ọzọ!
Onye mathimasetiki, Paris
Akwa ngwaahịa adịghị akwụ ụgwọ! Ọ ga-abụrịrị ihe mmadụ ga-achọ ilele vidiyo na ntanetị n'ịntanetị ma ọ bụ maka ikiri mgbe e mesịrị. Ọ dị mfe iji, nchekwa ma rụọ ọrụ nke ọma na nbudata vidiyo!
Nwa akwukwo, London
Budata Vimeo vidiyo na MP4 na kacha mma 2021